प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरु– बलात्कारीलाई फाँसीदेखि भेनेजुएलासम्म – Everest Dainik – News from Nepal
प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरु– बलात्कारीलाई फाँसीदेखि भेनेजुएलासम्म
काठमाडौं, व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने क्रम शुरु भएको छ । सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहका बिभिन्न मुद्दामा आफ्ना धारणा राखेका छन् । कसले के भने त ?
आर्थिक विकासमा नयाँ फडको मार्ने जनताको भरोसा टुटेको छ । आर्थिक सूचकांक नकारात्मक, विदेशी लगानी खुम्चिएको, विकास खर्च नभएको अवस्था छ ? यो अवस्थामा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल यो सरकारले बनाउन सक्छ ?
बाइडबडी जाँचजबुझ आयोगको काम कहाँसम्म पुग्यो ? सप्तरी जिल्लाको प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा करोडौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको छ । बिभिन्न निकायमा डेलिगसन दिँदा पनि हालसम्म कार्वाही नभएकोले सरकारसँग सचेत हुन माग गर्दछु ।
पर्सा जिल्ला बीरगञ्ज नगरपालिकामा मासु उद्योग र हड्डी उद्योगका कारण दुर्गन्धित र प्रदुषण बनेको छ । अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गर्दा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
दिव्यमणी राजभण्डारी, एक वर्ष बितिसक्दा उत्पादन बढेको छ, आय घटेको छ, रेमिटेन्स बढेको छ, वैदेशिक लगानी घटेको छ । यो अवस्थामा सर्वदलीय छलफलको माग गर्दछु ।
लमजुङको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निमाणको काम अझै पुगेको छैन । तनहुँमा बाटो अलपत्र परेको छ । भौतिक योजना मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछु । मनाङ जाने बाटोको टेण्डर समेत खुल्न सकेको छैन ।
न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुनुपर्दछ । सरकारले मर्यादाक्रमको निर्णय संसदका सदस्यलाई प्रदेशका मन्त्रीभन्दा तल राख्नु न्यायोचित छैन । सिडिओलाई गाउँपालिका र नगरपालिका मातहत राख्दा उनीहरुको मनोबल गिरेको छ । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
हावा र हुरीको समय शुरु भइरहेको छ, गाउँमा आगलागिका घटना बढेका छन् । बेलैमा व्यवस्थापन र जंगलको क्षति हुनबाट जोगाउन बेलैमा सचेतता अपनाउन माग गर्दछु ।
१२ लाख विद्यार्थी स्कूलमा हुँदा पनि आज के कारणले हराए, सरकारसँग जवाफ प्रश्न गर्न चाहन्छु । २०७४ सालमा ६८ लाख विद्यार्थी थिए । के कारणले हराए । हामी पनि जनताबाट चुनिएको आएका छौं, सरकारबाट मर्का र विभेद बनाइएको छ, ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
ललितपुर जिल्लाको मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा तीनवटा आगलागीका घटना भएका छन, घर जलेर पुरै खरानी भएको छ । तीनवटा परिवार न्यून आयस्तरको परिवार भएकोले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै क्षतिपूर्तिको प्याकेजको माग गर्दछु ।
गत आबसम्म सडक र सिचाईंसम्मका बजेट विनियोजन गरेर क्रमागत भएका योजनाहरु यसवर्ष काम शुरु नै नभई अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यस्तो किन ? केन्द्रलाई सोधे प्रदेशमा गएको भन्छ । प्रदेशले काम शुरु गर्दैन । गत वर्ष शुरु भएका पनि परिपत्र जारी गरेर यो वर्ष रोकिएका छन । गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
पर्वत जिल्लाका बिभिन्न सडक अहिले बजेटको अभावमा अलपत्र अवस्थामा छन् । कसैले जिम्मेवारी लिएको छैन । जनतामा आक्रोश पैदा भएको छ । बजेटका लागि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । बाग्लुङ डिभिजन सडक र मातहतका २२ सडक कसले ठेका लगाउने अन्यौल भएको छ । यो काम अगाडि बढोस
पार्वती जिसी चौधरी
अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा धारण राख्दा देश र जनताको हितमा हुने गरी बोल्नुपर्छ । भेनेजुएलासँग कुटनीतिक सम्बन्ध नै छैन । नेकपा अध्यक्षले अमेरिकी हस्तक्षेप भन्नु, नेकपाले अनुमोदन गर्नु र सरकारले त्यही अनुसार बोल्नु गलत छ ।
नेकपाको एकवर्षे समाजवादमा महिला हिंसाका घटना बढेका छन् । ११३० हिंसाका घटना बढेका छन् । २१ प्रतिशत बढी १५ वर्ष मुनिका बालबालिकामाथि बलात्कारका प्रयासका मुद्दा छन् । निर्मलाको अपराधी सरकारको वरिपरि घुमेको छ । बलात्कारका यी मुद्दालाई, बालबालिकालाई जोगाउन फाँसीको सजायको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।
सरकार बिस्तारै शाही साशनकै दमन ग्रहण गर्दैछ । भ्रष्टाचार र मूल्यबृद्धिविरुद्ध नेविसंघका नेताहरु आन्दोलनमा उत्रेका नेताहरुमाथि मुद्दा चलाउने, पक्रिने घटना घटेका छन् । के नेविसंघलाई आन्दोलनका लागि निम्त्याएकै हो । तत्काल तीनजना नेतालाई रिहा गरियोस् ।
सार्वजनिक यातायातमा सीटमा यातायातको आरक्षण र भाडामा ५० प्रतिशत कानुनमा व्यवस्था भएपनि काठमाडौं बाहेक कतै पनि कार्यान्वयन भएको छैन । विद्यार्थीलाई भाडा छूट छैन । महिलाहरुलाई सीट छुट्टयाउने कुरा कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
भेनेजुएला सार्वभौम देश हो । त्यहाँको तेल कब्जा गर्न अमेरिकाले विपक्षी नेतालाई मान्यता दियो । त्यसैले यो विषयमा नेपाल सरकारको पनि ध्यान जानुपर्छ । स्पष्ट शब्दमा वक्तव्य आएको छैन । नेकपा पछाडि हटयो कि भनेर पनि पत्रिकामा आएको छ । संसदमा समेत यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ ।
नेविसंघले उठाएका मागमा गम्भीर बनोस । गिरफतार नेताहरुको रिहाई होस ।